Ny ZTE Axon 10 Pro 5G dia efa nahazo alalana hamidy any Eropa | Androidsis
Ny volana febambra lasa teo no nampiantrano ny fandefasana iray amin'ireo finday avo lenta haingana indrindra manerantany. laharana farany AnTuTu. Miresaka momba izany isika Axon 10 Pro 5G, ny sainan'i ZTE amin'izao fotoana izao izay mbola tsy nahita ny jiro tao amin'ireo magazay Eoropeana, ary izany rehetra izany dia noho ny tsy fisian'ny mari-pahaizana CE izay tsy nananany, mandraka ankehitriny.
Ny finday izao dia mahazo alalana hamidy amin'ny tsena eropeana; manokana kokoa, ao amin'ny faritra ara-toekarena eropeana (EEA). Noho izany, tsy ho ela isika dia afaka mahazo azy io amin'ny fivarotana ara-batana sy -tserasera tsy mila manafatra azy any Chine na firenena hafa.
Ny Axon 10 Pro 5G mpanamboatra sinoa dia efa manaraka ny fenitra momba ny fahasalamana, fiarovana ary fiarovana ny tontolo iainana sy ny fenitra amidy ho an'ny vokatra amidy ao anatin'ny faritra ara-toekarena eropeana (EEA). Ankoatr'izay, ny famoahana ireo fanandramana fanamarinana 5G ho an'ny fiarovana ny herinaratra, taratra elektromagnetika, fampifanarahana elektromagnetika ary fahombiazan'ny fahita amin'ny radio, ankoatry ny hafa nahazo fankatoavana ara-teknika avy tamin'i Du sy Etisalat ihany koa ilay fitaovana. ZTE no tompon'andraikitra tamin'ny famoahana izany vaovao izany.
Raha jerena kely ny toetra sy ny mombamomba an'ity terminal ity dia tsara ny manonona izany Izy io dia manana efijery AMOLED 6.47-inch miaraka amin'ny vahaolana FullHD + ary 90% ny tahan'ny efijery amin'ny vatana. Ity iray ity dia manana sisin-tany vitsivitsy sy marika kely, izay ahitana sensor ho an'ny selfie ary mihoatra ny 20 megapixels ny vahaolana. Ny tontonana koa dia manana mpamaky rantsantanana miorina ao aminy.
ZTE Axon 10 Pro 5G tampon'ny tabilao AnTuTu noho ny fitahirizana haingana kokoa
Ao anaty ao anatiny no misy ny Snapdragon 855 avy amin'ny Qualcomm miaraka amin'ny 6/8 GB RAM ary 128/256 GB ny habaka fitehirizana anatiny, izay azonay manitatra amin'ny alàlan'ny karatra microSD hatramin'ny 1 TB. Tsara ihany koa ny manamarika izany dia manome batterie 4,300 mAh lehibe miaraka amin'ny fanohanan'ny famahana haingana ary fakan-tsary avo roa heny 48 MP + 8 MP + 20 MP.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny ZTE Axon 10 Pro 5G dia efa manana ny fanamarinana CE hamidy any Eropa
Libra: cryptocurrency an'ny Facebook handoavana vola amin'ny WhatsApp sy Messenger